Jermalka oo loogu baaqay xadidida hubka - BBC Somali
Jermalka oo loogu baaqay xadidida hubka
Image caption wiilka dadka laayay ayaa la sheegay in uu sanado diyaarinayay weerarka
Siyaasiyiinta caanka ah ee dalka Jermalka, ayaa ku baaqay in la xadido iibinta qoryaha iyaga oo ka jawaabaya toogashadii Jimcihii ka dhacday magaalada Munich.
Hoggaamiye ku xigeenka dalkaasi Sigmar Gabriel, ayaa sheegay in wax walba oo suuragal ah la sameeyo si loo yareeyo helida hubkan dilaaga ah.
David Sonboly, oo 18-jir ah, ayaa dilay sagaal qof ka hor inta uusan isaga is dilin.
Wuxuu watay bistoolad, iyo rasaas ka badan 300.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jermalka Thomas de Maiziere, oo booqday halka ay toogashada ka dhacday, ayaa sheegay in uu doonayo in uu dib u eego sharciga hubka.
Inta badan dadka magaalada Munich, ayaa soo jeeday iyaga oo xusaya dadkii dhintay, oo todaba ka mid ah ay ahaayeen dhalinyaro.
Seddex ka mid ah dadkaasi waxay ka soo jeedeen Kosovo, seddexna Turkiga, halka midka kalana uu ka soo jeeday Giriiga.
27 ruux oo kale ayuu dhaawac soo gaaray, 10-ka mid ah ayayna xaaladdoodu liidataa, dhibaatadan ayaa ka dhalatay weerarkii ka dhacay xarunta dukaameysiga ee Olympia, ee magaaladaasi ku taala, halkaas oo ah suuqa ugu weyn gobalka Bavaria.
Madaxa booliska Munich, ayaa ugu baaqay saxaafada in ay ixtiraamto arrimaha gaarka ah ee dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay weerarkii dhacay Isniintii, marka iskuulada dib loo furo.
Gabriel oo hoggaamiya xisbiga yar ee ku jira dawladda dalkaasi ee midowga ah ayaa yiri " waa qasab in aan sii wadno wax walba oo aan sameyn karno oo lagu yareeynayo laguna xadidayo helida hubkan dilaaga ah".
Wuxuu sidaa u sheegay kooxda warqabadka ee Funke Mediengruppe.
Wuxuu sheegay in maamulku ay baarayaan sida uu Sonboly, heystana labada dhalasho ee Iran iyo Jermalka uu u awooday in uu helo hub waloow uu qabay calaamado muujinaya in dhibaatooyin dhanka maskaxda ay haysato.
Waxa uu sheegay "in xadidida hubka ay tahay arrin muhiim ah"
Sharciga ayaa la sii adkeeyay kaddib toogasho ka dhacday iskuul ku yaala Erfurt sanadkii 2002, halkaa oo ay ku dhinteen 16 qof iyo kii ka dhacay Winnenden sanadkii 2009-kii, oo ay ku dhinteen 16-qof.
Dadka hubka iibsada ee ay da’dooda ka yartahay 25-sano ayaa la rabaa in laga baaro cudurada maskaxda ku dhaca ka hor inta aanan laga iibin.
Hubka sida darandooriga ah u dhaca ayaa laga mamnuucay dalkaasi, halka hubka aan darandooriga aan aadka ahayn u dhaca laga ogol yahay oo keliya in lagu ugaarsado ama loo siticmaalo markii ay jiraan toogasho lagu tartamayo.
Inkastoo xadidaadu jirto, haddana dalkaasi waxa uu yahay dalka caalamka tirada ugu badan ee hubka ay dadku heystaan, waxa ayna ku jirtay kalinta afaraad sida laga soo xigtay wargeyska Spiegel, halka ay kaalinta sedexaadna ay ku jireen Maraykanka, Switzerland iyo Finland sanadkii 2013.